Shintsha ukubukeka kweGnome ngeGnome-Colour-Chooser | Kusuka kuLinux
Shintsha ukubukeka kweGnome ngeGnome-Colour-Chooser
Izikhathi eziningi sifaka ingqikithi IGtk esikuthandayo kepha ngokuhamba kwesikhathi sithola ukuthi kunemininingwane ethile esingayithandi, umbala wemenyu, usayizi wezimpawu, ububanzi bemigoqo yokuhambisa, noma izinto zalolo hlobo.
En I-Gnome sinohlelo lokusebenza oluzosivumela, ngendlela elula necacile, ukuguqula izinto eziningi zetimu yethu IGtk, igama lakho ngu Isikhethi seGnome-Colour.
Ukuyifaka, sisebenzisa I-Synaptic noma esigungwini esisibeka:
Manje kuzofanele sidlale ngezilungiselelo kancane futhi uma sithanda umphumela, singathumela amasethingi ngefomethi .magazine.
Uma sithande ushintsho futhi sifuna ukubuyela ekucushweni kokuqala, sisusa ifayela lokumisa:
bese kamuva sivula ifayela .gtkrc-2.0 ekhaya lethu, futhi siqeda umugqa:
bese siqala kabusha i-nautilus:
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukubukeka / Ukwenza ngezifiso » Shintsha ukubukeka kweGnome ngeGnome-Colour-Chooser
Ekhuluma ngokushintsha ukubukeka kwe-Gnome, ungasiguqula isithonjana sikadoti ku-avant window navigator? Ngine-Ubuntu 11.04. Futhi ngisebenzisa i-Elementary icon pack (angazi ukuthi kufanele yini). Ngisebenzisa ikani likadoti kusuka ku-Avant-Windows-Navigator futhi uhlelo alukuvumeli ukushintsha isithonjana. UMA isithonjana sikwideskithophu uma ngikwazi ukukushintsha, ingqikithi ikuhlelo
Amachweba anezindikimba zawo, okungenani yilokho engikukhumbulayo ngazo, futhi enye indlela kungaba ukuhlela izingqikithi ukushintsha isithonjana esithile esimweni sedoti kungaba izithonjana ezi-2.
Impela, ngithole ifolda yomibili lapho kunezithonjana ze-awn nefolda lapho nginetimu efakiwe, ingqikithi eyisisekelo, kepha AKUKHO KWABALULEKILE BABILI okuyisithonjana sodoti. Leyo yinto embi 🙁 futhi angazi ukuthi ngizoyilungisa kanjani. Futhi ayiwona, kepha hheyi, kufanele ikwazi
Ngabe i-AWN iyayisebenzisa isithonjana soDoti osephaketheni lesithonjana elisebenzayo?
Zama okulandelayo ... shintsha iphakethe lesithonjana noma itimu oyisebenzisayo, vala uphinde uvule i-AWN bese usitshela ukuthi isithonjana siguqule noma yini.
Ngisanda kuzama ongangibuza khona futhi yebo, awn isebenzisa isithonjana sikadoti setimu esetshenziswayo
Ngisebenzisa i-Elementary (babaaa) ​​icon pack 😀
Isithonjana sikadoti siyi-SUPER HIDDEN, esinamakhanda aqinile ngisanda kuqala ukusibheka futhi ngathola isithonjana. Ngakho-ke ngishintshe okwangempela ngafaka ebengikufuna futhi yilokho 😀
Kufanele zengezwe .sgv
Kuyintokozo ukwazi ukuthi ekugcineni ukwazile ukuguqula obukufuna 😉
Ukubingelela nokubonga ngokuma ngu-🙂
I-Apt- * noma i-Aptitude, iyiphi okufanele uyisebenzise?